Lionel Messi Oo Si Layaab Leh Kaga Farxiyay Mid Kamid Ah Taageerayaashiisa – Garsoore Sports
Markii taageeraha kubadda-cagta ee reer Brazil Igor Magalhaes uu go’aansaday inuu sawir weyn oo Lionel Messi ah uu ku sawirto dhammaan dhabarkiisa sannadkii 2019, waligiis kuma riyoon karin in maalin uun farshaxankaa uu ogolaansho kaga heli doono Messi laftiisa.
Saddex jeer oo kala duwan ayay Igor ku qaadatay in loo dhammeeystiro sawirka Tattoo-ga ee dhabarkiisa ku dhegan, wuxuuna sawirka weyn muujinayaa Messi oo u dabaaldegaya goolkiisii guusha (sidoo kale wuxuu ahaa kiisii 500aad intii uu xirfadiisa ku jiray) guushii 3-2 Barca ay Real Madrid ka gaareen sannadkii 2017 – xiddiga Barcelona wuxuu kor u hayaa maaliyadiisa No.10 isagoo Aamusiinaya jamaahiirtii badnaa ee Bernabeu.
Maamuuska weyn ee loo sameeyay Messi ayaa waxaa ka hadlay saxaafadda Argentina dhammaadka Isbuucaan kaddib markii Magalhaes la arkay isagoo daawanaya tababarka xulka qaranka Argentina ee Brasilia kahor kulankooda Copa America 2021 oo ay Paraguay kula cayaarayaan caasimada Brazil.
Wuxuu sawirkaa si dhakhso leh ugasoo muuqday barta ‘Instagramka’ ee wariyeyaasha TyC Sports, halkaas oo ay ka heleen in ka badan milyan qof dhowr maalmood gudahood.
Yeelkeedee, waxaa layaab lahaa in dadkii ka faceliyay postigaas uu kamid ahaa Messi laftiisa, oo faallo dhif ah kaga tagay barta bulshada.
“Tattoo xun!” ayuu ku kaftamay weeraryahanka Barca, kahor inta uusan ku darin “Waan jeclahay! Waxaan jeclaan lahaa inaan arko oo aan saxiixo.”
Sheekadu waxay mareysaa heer kasii yaab badan iyadoo kulan u dhaxeeyay Messi iyo Magalhaes la qorsheeyay inuu ka dhaco banaanka huteelka kooxda Argentina ee magaalada Brasilia isbuucan.
TyC Sports (@tycsports)’in paylaştığı bir gönderi
Isaga oo uu weheliyo madaxa amniga kooxda ayaa Messi wuxuu u soo dhaqaaqay dhanka taageerayaashii yaraa ee ku sugnaa banaanka huteelka kooxda, wuxuuna dadkii ka abaaray Igor Magalhaes oo uu farshaxanka jirkiisa saxiix ku qoray, siddii uu u balan qaaday inuu sameyn doono.